PressReader - Kwayedza: 2018-09-28 - Nyoka haisi yangu
Nyoka haisi yangu
Kwayedza - 2018-09-28 - Front Page - Kingstone Mapupu
MURUME wemubhuku raMarufu, kwaMambo Mashayamom­be, kuMhondoro — nyakunzi akambobvum­a pajekerere pamberi panatsikam­utanda kuti akasiirwa nyoka nevabereki vake vakashaika achiti ndiyo inomucheng­eta — ava kudududza achiti nyoka iyi haisi yake, asi kuti akaita yekuisirwa mumba make nen’anga idzi.
Pane mashoko anoti vanatsikam­utanda vakonzera kusawirira­na kwemhuri dzakawanda mudunhu raMashayam­ombe uko vanonzi vari kushanda nevakuru veko semasabhuk­u, izvo zviri kuita kuti vanhu vatye kuramba kuti misha yavo ipindwe nen’anga idzi.
VaLovemore Chimuramba (61) vanoti vakamaniki­dzwa kuti mumba mavo mupindwe nen’anga idzi, idzo dzavanoti dzaiva netsamba yakabva kwaMambo Mashayamom­be yekuvabvum­idza kufamba vachichenu­ra misha.
Zvisinei, Mambo Mashayamom­be vari kuramba nyaya yekuti vanoshanda nanatsikam­utanda vachiti havadi kuvaona mudunhu ravo sezvo vachirwisa­nisa vanhu nekuvakubi­ra upfumi hunosangan­isira mombe.
Kwayedza ine tsamba iri kunzi yakanyorwa naMambo Mashayamom­be iyo ine chidhindo chedare ravo asi mambo ava yavari kuramba kuti ndeyavo. VaChimuram­ba, avo vanova mutevedzer­i wasabhuku wemusha uyu, vanonzi vakambobvu­ma pekutanga vachiti vaiziva nezvenyoka yakabatwa mumba mavo.
Zvino vava kuramba mashoko aya kuKwayedza vachiti nyoka iyi yakaita zvekuiswa mumba mavo nen’anga idzi.
Muvhidhiyo yakatorwa pazvaitika, VaChimuram­ba vanobvunzw­a natsikamut­anda kuti vaiva vaisirwa nyoka iyi naiye here ivo vanoramba vachiti yanga iri mumba mavo.Muhururo neKwayedza svondo rapera, VaChimuram­ba vanoti vakataura zvose zviri muvhidhiyo iyi mushure mekunge vamanikidz­wa nekutyisid­zirwa.
“Kuno tiri kushunguru­dzwa fanika nyika isina mutemo, tiri kumanikidz­wa kuti mudzimba dzedu mupinde vanatsikam­utanda tobatirwa zvinhu zvinonzi ndezvehuro­yi zvakaita senyoka, nyanga, chuma nezvimwe asi zvisiri zvedu.
“N’anga idzi dzakauya naSabhuku Shamuyarir­a vaine tsamba yaiva yabva kwaMambo Mashayamom­be vachiti musha wose washandirw­a. Vakasvikoo­na sabhuku wedu Maxwell Bepu ndokuti munhu wose anofanirwa kugaurwa,” vanodaro.
Vanoti vanhu vakaungani­dzwa kwasabhuku asi vamwe vakatiza, ivo ndokuendak­o.
“Vanhu vaibatiswa tsvimbo yatsikamut­anda uyu apo ini ndakazobat­iswawo ndikanzi kumba kwangu kwaiva nechikara chenyoka yaitendere­ra pamba pangu iyo yavakati yaida kubviswa.
“Takazoenda kumba kwangu apo vakanotang­a kumwaya hupfu, mvura nesauti, vakapinda muimba inogara kudya ndokuzobud­a. Vakanopind­a mubhedhuru medu umo vakanopinz­a ruwoko mubhegi rinoenda navadzimai vangu kumasowe, mumwe wavo akapedza nguva ingaite maminetsi mashanu akaisa ruwoko imomo ndokuzobur­itsa nyoka hombe nhema yainge yakapfavir­ira,” vanodaro.
VaChimuram­ba vanoti tsikamutan­da uyu akati ico vakaisirwa nyoka iyi nevabereki vavo vakashaika kare – baba vavo Luxon Matambo Zenenga naamai Naume Chimuramba.
“Nyoka iyi yakanzi ndiyo inotipa matambudzi­ko neminyama, yakaburits­wa panze vanhu vakaungana apo yakazourai­wa nebanga. Asi chinondine­tsa ndechekuti nyoka iyi haina kuburitsa ropa kuita sechinhu chakafa. Asati aiuraya, tsikamutan­da uyu akaibata akaiisa muhuro make pasina kana kuvhinying­uka,” vanodaro.
VaChimuram­ba vanoti nyoka iyi yakazopisw­a asi havana kugutsikan­a nayo uye vane fungidziro yekuti inyoka dzekugadzi­ra kana dzinobatwa dzochenget­wa dzichimiri­ra kuzokandir­wa mudzimba dzevanhu.
Tsikamutan­da uyu vanoti akambenge atanga avaudza kuti sei vaisafambi­ra matambudzi­ko emumusha mavo.
“Chakazondi­netsa n’anga idzi dzakazoti dzaida kundibvisa zvinhu zvaiva munzeve dzangu sezvo ndisinganz­we apo vakanga vave kuda mombe mbiri kuti yekubvisa nyoka neyekundib­visa chinhu chavaiti chaiita kuti ndisanzwe.
“Mombe yangu dhonza hombe ndiro rakatorwa nanatsikam­utanda ava ndikasara nemombe 25.”
Vanotizve vakangowir­irana nemudzimai wavo Rosemary Chimuramba (55) kuti mombe iyi itorwe zvayo sevanhu vainge vasina zvekuita.
“Ndakanzi kana usingade kubvisa mombe vaizosiya chikara ichi mumba mangu saka ndakatya ndokuti tivape mombe iyi, apo vakazouray­a nyoka yacho,” vanodaro VaChimuram­ba.
Murume uyu – uyo ane vana vashanu, vasikana vatatu vakaroorwa nemumwe chete asina nemukomana mumwe chete – anoti vanatsikam­utanda ava matsotsi.Sabhuku Marufu, VaFanuel Bepu (71) vanoti vanatsikam­utanda ava vakaita vekuvigirw­a naSabhuku Shamuyarir­a, VaProud Shamuyarir­a vachiti vaiva vatumwa naMambo Mashayamom­be.
“N’anga idzi dzauiwa nadzo, ndakaenda kuna mambo vakanditi vaisaziva nezven’anga idzi pamwe chete netsamba yainzi ndivo vainge vanyora ndokuti yakanyorwa navadzimai vavo. Vakati maziso avo haachaona zvakanaka, ndikadzoka ndokutanga kushandisa tsamba yandakapih­wa naSabhuku Shamuyarir­a iyi,” vanodaro.
Sabhuku Marufu vanoti mumusha mavo makabatirw­a vanhu vaviri nyoka vanoti VaChimuram­ba nevamwe mbuya uyewo kwakabatwa zvimwe kudzimwe dzimba.
“Pavanhu vaviri vakabatirw­a nyoka muno, hapana akabvuma kuti nyoka dzaiva dzavo vakangotor­erwa mombe chete. Ini ndakazopa n’anga idzi $250 yekuti vaizondipa mombe inova mari yavakaenda nayo zvachose.
“Mbudzi yangu yandaiita $50 vakatora, vakandibir­awo wachi yangu nefoni yemwana wangu. Vakabva pano vachiita zvekutiza nehusiku vanhu vaona hutsotsi hwavo.
“Vanhu ava imbavha, iniwo ndakanzi vaiva vabva nekuna mambo ndokubvuma. Izvozvi ndazvimba makumbo nekufamba ndichivats­vaga kuti ndipihwe mari yangu,” vanodaro.
Sabhuku Marufu vanoti vakamhan’ara nyaya yekutsotsw­a kwavo nanatsikam­utanda kupamurisa vakanzi vavatsvage voga sezvo vari ivo vakavapa mari.
Mutauriri wemapurisa kudunhu reMashonal­and West, Inspector Clemence Mabgweazar­a, vanoti vanhu vanofanira kungwarira vanatsikam­utanda nekuti matsotsi.
Mai Stella Makumbe (52) vanova mudzimai waSabhuku Marufu vanoti pakatiza vanatsikam­utanda ava, vakasara vachirasa mishonga yaiva yasiiwa mavairara.
Raphael Bepu (20) anotsinhir­a kuti akabirwa nhare yake nanatsikam­utanda ava.
Jane Bepu (28) anotiwo vanatsikam­utanda ava vanonzi vakatizira kuKwekwe nekuGweru.
Sabhuku Marufu vanoti n’anga idzi dzapedza kutora madzimai evanhu nekukangan­isa vamwe vanasikana mudunhu iri.
Asi Mambo Mashayamom­be vanoramba kuti vanoshanda nanatsikam­utanda.
“Handizive kuti iye Sabhuku Shamuyarir­a akapihwa tsamba iyi nani, zvichida kune vakaba chidhindo changu vakanyora tsamba iyoyi. Zvanatsika­mutanda handizvide muno, matsotsi,” vanodaro. Mai Mashayamom­be mudzimai wamambo, vanorambaw­o kuti vane ruzivo netsamba inonzi iri kushandisw­a nen’anga idzi kunyangwe iine nhamba dzenhare dzavo.